बादलसहित ६ भाईले आफ्ना सांसदको हिसाब सके ,एक दलसँग सहकार्य गरेर सरकारमा बनाउने…हेर्नुहोस् । – yuwa Awaj
बादलसहित ६ भाईले आफ्ना सांसदको हिसाब सके ,एक दलसँग सहकार्य गरेर सरकारमा बनाउने…हेर्नुहोस् ।
मंग्सिर ९, २०७७ मंगलबार 5
काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) फुटको संघारमा छ। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा आलीलाई गम्भिर आ’रोप लगाएर प्रतिवेदन ल्याएपछि राजनीति तरंगित बनेको हो।
ओलीले एकलौटी गरेपछि प्रचण्डले आफ्नो कडा कदम चालेको पार्टी भित्रै पनि सुन्न पाइन्छ। अब प्रचण्डसँग मिल्न नसकेको अवस्थामा ओलीले पार्टी फु’टाएर पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने चाह राखेको स्पष्ट हुन्छ। किनकि शनिबार तीन घण्टा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको छलफलले ओली पार्टी फुटाउने रण’नीतिका साथ अघि बढेको देखिन्छ।
तर, कतिले देउवासँग भेटेर ओलीले दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहलाई तर्सा’उन खोजेको रुपमा पन िचित्रित गरेका छन्। यदी पार्टी फु’टेको अवस्था आयो भने ओलीलाई कति र्सांसद भएर सरकार बनाउन पुग्छ त ओली त्यताको हिसाब किताबमा पनि लागि सकेको बताइएको छ।
अहिले प्रतिनिधिसभामा कांग्रेससँग ६३ सांसद छन् । र जसपासँग ३४ जना सांसद छन् । यी दुई दल मिल्दा ९७ जना सांसद हुनेछन् । यसरी हिसाब गर्दा सरकार बनाउन अब ४१ सांसदआवश्यक पर्छ। किनभने अहिले सरकार बनाउन जम्मा १३८ सांसद भए पुग्छ । कदा’चित कांग्रेस, जसपा र ओली समूह मिल्दा सरकार निर्माणका लागि सांसदको संख्या प’र्याप्त हुन्छ । ओलीसँग नेकपाका ६४ जना सांसद त हस्ताक्षर गरेर नै बसेका छन् ।
नेकपाभित्र बहुमत पु¥र्‍याउन ८८ जना सांसद चाहिने भएका कारणले मात्रै ओली क’मजोर देखिएका हुन । कम्तीमा ६४ जना सांसद नै बोकेर गए भने यी तीन समूहको गठजोडमा सरकार बन्न सक्छ । तर, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई जसरी दिल्ली भ्रमणका बेला अप’मानजनक ढंगमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्यमन्त्रीबाट कानून मन्त्रालयमा ताने, त्यो आ’क्रोशले यादव सहजै ओली कित्ताको समर्थनमा नपुग्न सक्छन् ।
उपेन्द्र यादव ओलीभन्दा पनि प्रचण्डसँग निकै नजिक छन्। ओली नेतृ’त्वको सरकारमा यादवको प्रवेश पनि प्रचण्डका कारण भएको थियो । त्यस्तो अवस्थामा जसपाले ओलीलाई समर्थन गर्ने अवस्था आएन र कांग्रेस र ओली समूहले मात्रै सरकार बनाउनुपर्ने भएमा चाहिँ ओली समूहुलाई कम्तीमा ७५ जना सांसद चाहिन्छ । ओली समूहमा ७५ जना सांसन नपुग्दा भने ओलीलाई समस्या आउन सक्छ । -लोकपाटी
Prevसार्वजनिक खर्चमा व्यापक क’टौती, बैठक भत्ता, विदेश भ्रमणदेखि हेलिकप्टरको बिलसम्ममा क’डाई…हेर्नुहोस् ।
Nextकेपी ओलीले पार्टी फुटाए सबैले थुक्छन्, इतिहासले धि’क्कार्छ – माधव नेपाल
बेला-बेलामा टाउको फुट्ने गरी दुख्छ भने यस्ता कुरा अपनाउनुहोस ।(बिधि सहित)
प्रचण्डले ‘कि तँ छैनस् कि म छैन’ भनेपछि ईश्वर पोखरेल रिसले भए रातोपिरो, दिए कडा चेतावनी !
आफ्नै मुर्ति देखेर धुर्मुस मख्ख…हेर्नुहोस् ।
असार ७ पछि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गरिने (1287)
गाई का’ट्दै गर्दा २ जना प’क्राउ : (682)
के तपाईं घरमै बसिबसी चालक अनुमतिपत्र लिन चाहनुहुन्छ ? (354)
२.	असार ७ पछि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गरिने (1287)
३.	गाई का’ट्दै गर्दा २ जना प’क्राउ : (682)
६.	के तपाईं घरमै बसिबसी चालक अनुमतिपत्र लिन चाहनुहुन्छ ? (354)